Icandelo labacoci beGazi kunye neFektri-yaBenzi beCandelo lokuCoca iGazi
Le mveliso isetyenziselwa inkqubo yokuhlanjululwa kwegazi njengombhobho wokucocwa kwe-hemodia kunye nonyango lwe-hemofiltration kunye nokuhanjiswa kolwelo olungena endaweni yalo.
Isetyenziselwa ukuhluza i-hemodiafiltration kunye ne-hemodiafiltration. Umsebenzi wayo kukuhambisa ulwelo olusetyenziselwa unyango
Iindidi ezahlukeneyo Izixhobo zokuthambisa ze-HDF zilungele umatshini we-dialysis ohlukeneyo.
Unokongeza amayeza kunye nolunye usetyenziso
Yenzelwe ikakhulu umbhobho, idibeneyo ye-T kunye nempompo, kwaye isetyenziselwa ukuhluza i-hemodiafiltration kunye ne-hemodiafiltration.
I-SXG-YA, SXG-YB, SXJ-YA, SXJ-YB, SXS-YA kunye ne-SXS-YB
Iphakheji yesigulana esinye, iphakheji yesigulana esinye (iphakheji entle),
Iphakheji enezigulana ezibini, iphakheji enesigulana esiphindwe kabini